Levitikosy 2:1–16 "1 Ary raha misy manatitra fanatitra hohanina ho an’i Jehovah, dia koba tsara toto no hataony fanatiny; ary hanidina diloilo aminy izy sy hanisy ditin-kazo mani-pofona eo amboniny. 2 Ary hitondra azy ho amin’ireo mpisorona, zanak’i Arona, izy, dia handraofan’ireo eran-tànan-ila ny kobany sy ny diloilony mbamin’ny ditin-kazo manipofona rehetra; ary hodoran’ny mpisorona ho fofona eo ambonin’ny alitara izany fanati-pahatsiarovana avy aminy izany; dia fanatitra atao amin’ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an’i Jehovah izany. 3 Ary ny sisa amin’ny fanatitra hohanina dia ho an’i Arona sy ny zanany; ho masina dia masina avy amin’ny fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah izany. 4 Ary raha manatitra fanatitra hohanina voaendy amin’ny fanendasa-mofo hianao, dia aoka ho mofo tsy misy masirasira atao amin’ny koba tsara toto sady voaharo diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voahoso-diloilo. 5 Ary raha fanatitra hohanina voaendy amin’ny lapoely no fanatitrao, dia aoka ho koba tsara toto voaharo diloilo sady tsy misy masirasira. 6 Hovakivakinao izy ary hanidinanao diloilo; dia fanatitra hohanina izany. 7 Ary raha fanatitra hohanina voahandro amin’ny vilany no fanatitrao, dia koba tsara toto asian-diloilo no hatao. 8 Ary ho entinao ho an’i Jehovah ny fanatitra hohanina izay atao amin’ireo zavatra ireo; ary rehefa voatitra eo amin’ny mpisorona izany, dia ho entiny eo amin’ny alitara. 9 Ary ny mpisorona haka ny fanati-pahatsiarovana avy amin’ny fanatitra hohanina ka handoro azy ho fofona eo ambonin’ny alitara; dia fanatitra atao amin’ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an’i Jehovah izany. 10 Ary ny sisa amin’ny fanatitra hohanina dia ho an’i Arona sy ny zanany; ho masina dia masina avy amin’ny fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah izany. 11 Ny fanatitra hohanina rehetra, izay aterinareo ho an’i Jehovah, dia aza asiana zava-maharikivy; fa ny masirasira sy ny tantely dia samy tsy hangalanareo hodorana ho fofona ho fanatitra atao amin’ny afo ho an’i Jehovah; 12 fa ho fanatitra voaloham-bokatra ihany no hahazoanareo manatitra ireo ho an’i Jehovah; kanefa tsy hakarina eo ambonin’ ny alitara ho hanitra ankasitrahana izany. 13 Ary samy asio sira ny fanatitra hohaninao rehetra; ary ny siran’ny faneken’Andriamanitrao dia aza atsahatra amin’ny fanatitra hohaninao; fa manatera sira miaraka amin’ny fanatitrao rehetra. 14 Ary raha manatitra fanatitra hohanina ho an’i Jehovah avy amin’ny voaloham-bokatra hianao, dia salohim-bary voaendy amin’ny afo, dia lango avy amin’ny salohy maitso, no haterinao ho fanatitra hohanina avy amin’ny voaloham-bokatrao. 15 Ary hasianao diloilo izy, sady hasianao ditin-kazo mani-pofona eo amboniny; dia fanatitra hohanina izany. 16 Ary hodoran’ny mpisorona ho fofona ny fanati-pahatsiarovana avy amin’ny langony sy avy amin’ny diloilony ary ny ditin-kazo mani-pofona rehetra; dia fanatitra atao amin’ ny afo ho an’i Jehovah izany."
Fanatitra mani-pofona. Ny fanatitra hohanina dia natao tamin’ny koba tsara toto, norarahana diloilo ary nasiana ditin-kazo mani-pofona eo amboniny. Entina eo amin’ny zanak’i Arona izany, asiana sira ary handraofan’ito farany eran-tanan’ila avy aminy ka hodoran’ny mpisorona ho fofona ho fanati-pahatsiarovana. Ny sisa amin’ny fanatitra hohanina kosa dia ho an’i Arona sy ireo zanany. Mety natao tamin’ny fomba hafa ihany koa io fanatitra hohanina io, nandrahoina na nendasina, izay samy natao tamin’ny koba tsara toto voaharo diloilo saingy tsy asiana ditin-kazo mani- pofona eo amboniny. Eto dia i Jesosy Kristy mihitsy no ambara amin’ity fanatitra hohanina ity satria Izy (Kristy) no nandalo fitsapana, afo mahamay, tsy mila ditin-kazo mani-pofona ary efa ankasitrahan’i Jehovah ny tenany natao sorona. Isika izay manatona an’Andriamanitra izany dia mila manana an’i Jesosy Kristy velona ao am-pontsika raha tiana ny hahazo sitraka avy amin’Andriamanitra.
Manao ahoana ny kalitaon’ny fihavananao sy fiarahanao amin’i Jesosy Kristy? Fanatitra tsy misy fangarony. Ny fanatitra hohanina izay aterina ho an’i Jehovah ihany koa dia tsy misy zava-maharikivy, tsy misy masirasira ary tsy asiana tantely. Fampiasa amin’ny fampitomboana ny sakafo sy zavatra tiana hampalemilemy amin’ny fandrahoana izy ireo ka tsy azo entina eo anatrehan’Andriamanitra. Tsy mila zavatra sarintsariny: ampitomboana, mandingana fenitra arahina, sarotsaromana, seho ivelany sns,ny fanatonana an’Andriamanitra fa mila kosa ny fontsika mitsotra Aminy. Miantoraha sy miantehera feno sy tanteraka amin’Andriamanitra irery ihany ianao!
Vavaka: Jesosy Kristy Tompo ô! Inty aho, raiso aho ho Anao! Amena!